Tightwad Terror Talaado - Filimaan bilaash ah 7-20-21 - iHorror
Bogga ugu weyn Filimooyin naxdin leh Argagixisada Tightwad Talaadada - Filimo Bilaash ah oo loogu talagalay 7-20-21
Filimooyin naxdin lehFilimaanta Daabacaysa
Argagixisada Tightwad Talaadada - Filimo Bilaash ah oo loogu talagalay 7-20-21
Hey Tightwads! Ka waran kuleylkan? Is deji adigoo gudaha kula jira filimadan bilaashka ah ee laga bilaabo Tightwad Terror Tuesday iyo iHorror.
American Mary (2012), sharaf leh Alameda Entertainment.
Maryan Mareykan ah
Maryan Mareykan ah wuxuu ku saabsan yahay arday caafimaad oo baranaya inuu noqdo dhakhtar qalliin. Iyada oo deyn lagu xanibay, ayay dabaysha u noqonaysaa inay noqoto dhakhtar qalliin oo balaastig ah oo dhulka hoostiisa ah oo fulin doona dhammaan noocyada wax-ka-beddelka bukaannadeeda… illaa iyo inta qiimaha uu sax yahay
Naxdintaan 2012 waa astaanta astaamaha jirka ee Cronenbergian. Marka laga reebo inay agaasimeen Soska Sisters, Jen iyo Sylvia. Katharine Isabelle ayaa ku jileysa doorka hogaaminta. Bal fiiri Maryan Mareykan ah halkan at TubiTV.
The Innkeepers (2011), oo laga soo xigtay Magnet Releasing.
Dhismayaasha wuxuu ku saabsan yahay labo shaqaale inta lagu jiro dhamaadka usbuuc dhammaadka hoteel hore. Hudheelka la seexdo ayaa la yidhi waa la dabagalaa, oo labada shaqaaleba waxay qaateen sumcadda. Marka atariisho hore / dhexdhexaad ay hadda hubiso, labada ugaarsade ee cirfiidku waxay go'aansadaan inay sameeyaan wax yar oo curyaanimo maskaxeed ah oo iyaga u gaar ah.
Wadajirkaan 2011 Ti West waa filim cabsi badan. Jilayaasha waxaa ka mid ah Sara Paxton iyo Pat Healy oo ah shaqaalaha, iyo Kelly McGillis oo ah clairvoyant. U fiirso tallaalka ugu dambeeya si aad u dhow, laga yaabee xitaa laba jeer haddii aad u baahatid - waxaa jira wax cabsi badan oo halkaas ka jira. Baadhid Dhismayaasha halkan at Vudu.
Zombeavers (2014), xushmad Xayeysiinta Freestyle Releasing.
Zombeavers waa sida saxda ah ee aad u maleyneyso inay tahay. Waa filim 2014 ah oo ku saabsan koox carruur ah oo u safraya guri fog oo harada ku yaal dhammaadka usbuuca ee galmada iyo buuqa. Nasiib darrose iyaga, harada waxaa buux dhaafiyay koox fara badan oo zombie beavers ah - zombeavers, ma heshaa?
Majaajilladaan naxdinta lihi waa doqonnimo sida ay u eg tahay oo kale, laakiin haddii aad raadinayso madadaalo, waa kan. Sidoo kale waa dhibic wanaagsan oo loogu talagalay taageerayaasha cabsida leh ee u jiran dhimashada zombies. Jilayaasha waxaa ka mid ah boqorada qeylisa ee soo kordheysa Cortney Palm, Lexi Atkins, iyo Rachel Melvin, iyo yaa! taasi ma John Mayer baa? Baadhid Zombeavers halkan at Tubi TV.
Cirkii Madoobaa (2013), xushmad Filim Filim ah.
Sariiska mugdiga ah
Sariiska mugdiga ah waa filim naxdin leh oo saynis-fi ah oo ku saabsan 2013 oo ku saabsan qoys reer magaal xaafadeed caadi ah oo ku nool xaafad xaafad xaafadeed caadi ah. Dhacdooyin isdaba-joog ah oo isdaba-joog ah ka dib, qoysku wuxuu bilaabaa inuu ka fikiro inay bartilmaameed u yihiin wax xun. Iyo in wax xun uu ka iman karo xiddigaha korkiisa…
Ilaa iyo inta filimada afduubka shisheeyaha ay socdaan, Sariiska mugdiga ah waa, hagaag, mid ka mid ah. Si fiican ayaa loo sameeyay, laakiin wax aan horay loo qabanin ma jiraan. Jilayaasha waxaa ka mid ah Keri Russell, Josh Hamilton, iyo JK Simmons, sidaas darteed taas ayaa u socota. Qabasho Sariiska mugdiga ah halkan, sidoo kale TubiTV.
Carruurta (2008), sharaf leh Ghosthouse Underground.
Carruurta The waa sheekada laba qoys oo u ambabaxay dal ku go'doonsan dalxiis fasaxii jiilaalka. Markay halkaas gaaraan, dhammaan carruurta yaryar way bukoodaan - ka dibna u beddelaan dil oo weeraraan dadka waaweyn.
Midkani waa mid u baahan in loo arko taageerayaasha carruurta aan la iska indhatirin ee dilalka geysta ee naxdinta leh. Carruurta dilaaga ah waa kuwo cabsi badan, laakiin filimkan Britishka ah ee 2008 ayaa sidoo kale ku soo dhacaya dhowr muuqaal oo rabshado ah oo gabi ahaanba mudan. Waxay sidoo kale la ciyaareysaa shucuurta xoogaa maxaa yeelay, si fiican, kuwani waa carruur… sidee uga joojineysaa inay dilaan adigoon ku xadgudbin ilmahaaga naftaada? Soo ogow sida dadka waaweyn ee filimku u sameeyaan (ama ha u samayn) halkan, markale TubiTV.
Ma rabtaa filimo badan oo bilaash ah? Halkan ka fiiri wixii hore ee Argagixisada ee Tightwad.
Muuqaalka muuqaalka xushmad leh Chris Fischer.
maraykanka mariyatimirta kortiinkacirka madowFreeFilimada FreeFilimaan Bilaash ah Khadka Tooska ahJK SimmonsJen SoskaJohn MayerJosh HamiltonKatharine IsabelleKelly McGillisKeri RussellLexi AtkinsPat healyRachel MelvinSara PaxtonWalaalaha SoskaSylvia SoskacarruurtaDhismayaashaTi Westtightwad argagixiso talaadadatubi tvtubitvvuduZombeavers
James Jay Edwards waa nin naqdiya filimka iyo dhaqanka qaawan ee magaalada San Diego, California. Wuxuu xubin ka yahay SDFCS iyo OFCS, wuxuuna shahaadooyinka filimada ka haystaa SDSU iyo ASU. Wuxuu kaloo jecelyahay soo gaabin.
Agaasimaha 'Street Street' wuxuu leeyahay fikrado qabow oo lagu ballaariyo Franchise
DAAWASHO: Netflix Dhibcood Teaser waayo, Thriller 'Clickbait' Qeexaa Ogosto Release